ट्याग: पहिलो प्रभाव | Martech Zone
ट्याग: पहिलो प्रभाव
सोमबार, सेप्टेम्बर 17, 2012 सोमबार, सेप्टेम्बर 17, 2012 मीन बोरिबोने
"तपाइँले पहिलो छाप बनाउने दोस्रो मौका कहिले पाउँनुहुन्न," मेरो व्यवसाय प्राध्यापक, मार्भिन रेक्ट, सँधै आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउँछन्। धेरैले तपाईं भन्दा पहिले गरेका गल्तीहरू नगर्नुहोस्। आजको संसारमा, पहिलो प्रभाव विचार अझै पनी सत्य हो। जहाँसम्म, डिजिटल उपभोक्ताहरू र सोशल मिडियाले हामीलाई ती तरिकाले जडान गर्न अनुमति दिन्छ जुन हामी अतीतमा कहिले पनि पाउँदैनौं। र छाप जुन तपाइँ तपाइँको फेसबुक पृष्ठ, ट्विटर स्ट्रिम, वा वेबसाइट मा छोड्नुहोस् केहि हुन सक्छ
कति जना व्यक्ति खोज्दै छन् तपाईलाई के थाहा छ? अब ... वास्तवमा कति व्यक्ति तपाईलाई खोजिरहेका छन्? त्यसोभए ... यदि तपाईं जे गर्नुहुन्छ त्यसका लागि इन्टरनेटमा फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं किन आफ्नो नाम डोमेन नामको रूपमा खरीद गर्नुहुन्छ र यसमा ब्लग राख्नुहुन्छ? तपाईं नचाह्न सक्नुहुन्छ। एक डोमेन नाम किन्नुहोस् जुन सर्वप्रथम तपाईले के प्रतिबिम्बित गर्नुहुन्छ। जब सम्म व्यक्तिहरू तपाईं को हुन् भनेर थाहा हुँदैन, यो कसरी हो
शनिबार, जुलाई २१, २०१। शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
आज दिउँसो मैले बार्नेस र नोबलमा केही घण्टा बिताए। बार्नेस र नोबल मेरो घरको नजिक छ, तर मैले स्वीकार गर्नु पर्छ कि किनाराहरू धेरै राम्रो संगठित छन् र पुस्तकहरू सजीलो पाउन सजिलो छ। म बार्नेस र नोबलमा लगातार 'आईसल्समा हिंड्दैछु' र पढ्ने समय खर्च गर्नुको सट्टा। जे भए पनि, मैले मेरो मनपर्ने पत्रिका, प्रैक्टिकल वेब डिजाइन (उर्फ। नेट) लाई उठाए र अन्ततः डेरन र क्रिसको पुस्तक, ब्लगि forका लागि गोप्य रुपमा लिएँ।
वाइल्डकार्ड DNS र गतिशील सबडोमेन
शनिबार, मे 31, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मेरो सबै खाली समय (ha!) मा, म वन्य बर्ड्स अनलिमिटेड नक्शा अनुप्रयोग एक उद्यम अनुप्रयोग संग लपेट्न को लागी काम गरीरहेछु कि मान्छेहरु लाई आफ्नो स्टोर लोकेटर डिजाइन गर्न को लागी अनुमति दिनेछ। सेवा समाधानको रूपमा मेरो आफ्नै सफ्टवेयरको विकास मेरो केही वर्षको लागि एक लक्ष्य भएको छ, र यो ठूलो अवसर हो। शेल्फमा दुई कुञ्जी सुविधाहरू छन् जुन मैले अनुप्रयोगमा परिवर्तन गर्न चाहेको हुँ